बैंकिङ अन्तरबार्तामा कस्ता प्रश्न सोधिन्छन् ? (सहयोगि बैंकिङ सामग्री) – Banking Khabar
बैंकिङ अन्तरबार्तामा कस्ता प्रश्न सोधिन्छन् ? (सहयोगि बैंकिङ सामग्री)
जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा पनि सो क्षेत्रबारे भइरहेका गतिविधिहरु थाहा भइरहनु जरुरी हुन्छ । यो विषयमा अन्तर्वार्ता लिने व्यक्तिले प्रश्न सोध्न सक्छ । हाल चलिरहेको व्याजदर कति छ रु हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर को छन् रु यस्ता प्रश्नको जवाफका लागि पत्रपत्रिका पढ्ने गर्नुहोस् । हरेक दिन पढ्ने गर्नुहोस् । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्रै हैन राष्ट्रिय स्तरका हरेक गतिविधिको बारेमा जानकार रहनुहोस् । आफ्नो सामान्य ज्ञानलाई बढाउनुहोस् ।
अब आउँछ, मूख्य प्रश्न, जहाँ तपाईँले सकेसम्म धेरै बोल्नुपर्छ । यसअन्तर्गत तपाईँको सबल तथा दुर्बल पक्ष, हालसम्मै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी र तपाईँ उक्त बैंकको लागि कसरी सही हुनुहुन्छ जस्ता प्रश्नहरु राखिन्छन् । यो विषयमा तयारी गर्नुभएको छैन भने तपाईँ समस्यामा पर्नुहुनेछ । किनकि, यहाँ तपाईँले कसरी जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ र रोजगारदातालाई कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आउँछ । यस्ता प्रश्नको जवाफ दिँदै सोझै मेरा सबल पक्ष यी हुन् र दुर्बल पक्ष यी हुन् नभन्नुहोस् । आफूले एप्लाई गरेको पदका लागि संस्थाको मागेको योग्यताहरु केके छन्, ती मध्ये तपाईँसँग कुन चाहिँ पक्ष सबैभन्दा सबल छ र किन रु अनि तपाईँको अलि कमजोर पक्ष के छ र किन रु यो शैलीमा जवाफ दिनुहोस् । उक्त पदका लागि आफू फिट छु भनेर रोजगारदातालाई विश्वास दिलाउने अवसर हो यो ।